Big Bag, Fibc Bag, Kk Nokwelukiweyo Sack, Isitsha Bag, Jumbo Bag - Okufakiwe
Hebei Impahla Co., Ltd ingenye umphakeli professional izikhwama emaphaketheni ahlukahlukene e Hebei Isifundazwe yaseChina omunye abasabalalisi ngobukhulu enyakatho China for izikhwama ezihlukahlukene, kuhlanganise zezimboni emaphaketheni izikhwama izimboni, ezolimo, isakhiwo, nokumbiwa umkhiqizo okupakisha izimpahla ngobuningi futhi nsuku zonke emaphaketheni izikhwama ezinkulu, grocers, futhi wineshops okupakisha lokho abathengi bafuna.
Okuhlangabezanwe nakho kwethu nokuzinikela ziye zasiza ngempumelelo kithi ukusungula nobungane ibhizinisi amaklayenti abavela emazweni ehlukene kanye nezifunda.
Sine abasebenzi ukuphenya ngenkuthalo nokuhlola united, izinto ezishibhile, futhi omuhle othela nokucubungula izimboni besebenza ndawonye. Ngakho sikulungele kahle ukuhlangabezana yimuphi izidingo zakho kungenzeka umkhiqizo.
Thina engiyakubuyisela ithemba lenu ukubambisana ngomusa, nemikhiqizo high, ngamanani ukuncintisana kanye inkonzo yesikhathi iIgama.
Inkampani yethu e Shijiazhuang Idolobha Isifundazwe Hebei e China. Hebei kuyinto sifundazwe eduze maphakathi-ntshonalanga enyakatho yeChina Shijiazhuang kuyinto-dolobha yalo. Singabantu 400 amakhilomitha kude Beijing (inhloko-dolobha PRC), 1200 amakhilomitha kusuka Shanghai (komuzi ezinkulu e China), futhi amakhilomitha angu-400 esuka Tianjin (ethekwini enyakatho China). Iningi izimboni zethu eduze kwalo muzi.
Siyakwamukela lapha, ukwamukela ukuvakashela ihhovisi lethu namafektri, wamukelekile!
OPP yokuvikela ngocwazi izikhwama
Garden izikhwama / ikhava / ibhokisi izikhwama